HomeWararka CaalamkaSweden oo digniin kasoo saartay in loo safro Dal Iiraan laga bilaabo maalinta
. Christine Olsson / TT
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Iswiidhen ayaa ku talisay in aan la tegin dalka Iran laga bilaabo Khamiista shalay. Waxay sheegtay in awaamiirteeda ay khusayso Iran oo dhan ilaa amar dambe.
Dhammaadkii Abriil, Wasaaradda Arrimaha Dibadda waxay ku talisay ka hortagga “safarka aan muhiimka ahayn” ee Iran, iyada oo tani u sababeysay “xaalad aan raalli ka ahayn oo ka dhan ah Sweden.”
“Dhowr arimood oo ka dhanka ah Sweden iyo dalalka kale ee Yurub ayaa kordhay,” xafiiska warfaafinta ee wasaaradda ayaa ku yiri email-ka TT. Iran ayaa siyaabo kala duwan u sheegtay inaysan ku qanacsanayn dacwadda ka socota dalka Sweden ee lagu maxkamadeynayo muwaadin u dhashay Iran.
Muwaadinka Iran u dhashay waa Hamid Nouri , oo 61 jir ah, kaas oo sida uu qabo sharciga caalamiga ah lagu eedeeyay in uu Iran ka geystay dil wadareed sanadkii 1988. Maxkamadeyntiisa oo ka dhacday dalka Sweden ayaa soo afjartay horraantii bishii May. Xukunka ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo 14-ka bishan July.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Sweden ayaa sheegtay in “marka la eego xaaladda iyo xilliga safarka ee ugu sarreeya, waxaan jeclaan lahayn inaan muujinno khataraha la xiriira safarka Iran xilligan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda waxay aaminsan tahay inay jirto sabab lagu adkeynayo qawaaniinta si loo daboolo dhammaan safarka Iran.”